About us - XUZHOU MINYAN yokungenisa & YOKUTHUTHELWA KWENKQUBO CO., LTD
Abathunyiweyo bethu bokuthumela ngaphandle beHydraulic yimigangatho yemizi-mveliso yokwakha, ukusebenza, amandla kunye nokusebenza ngokuchaseneyo. Iibhakethi zethu ze-Excavator zihambelana nomatshini nomsebenzi kwaye zibonelela ngokusebenza kakuhle kwisicelo sakho. Nokuba sisenkwali, indawo yokwakha okanye ukulungiswa komhlaba - iiBuckets zethu zijolise kumandla apheleleyo nasekusebenzeni komatshini kulowo msebenzi ukuwenza ngokugqibeleleyo.
Inani elininzi lophando kunye nengxelo yabathengi kwihlabathi liphela idityanisiwe kuyilo lwebhakethi ngalunye. Ukusebenza komthengi kuyakholisa kwimodeli nganye yebhakethi. Uluhlu olubanzi lweebhakethi zemigangatho kunye nezikhethekileyo ze-excavator ziyafumaneka ngezisombululo zokumba, ukwemba, ukulayisha kunye nokugqiba. Sineminyaka emininzi siyila ilifa kunye nokuvelisa amabhakethi e-excavator kwihlabathi liphela. Ungathembela kumgangatho wokwenene owakhiwe kuwo onke amabhakethi. Iibhakethi zethu ziyaphuhliswa kwaye zavavanywa ngaBembi ukubonelela ngenkqubo yokusebenza okukhethekileyo kunye nokuthembeka. Zenziwe ngeeBhakethi zokugqibela ziyilelwe kwaye zakhiwa zacaciswa-ziqinisekisa umgangatho kunye nokuqina. Isinyithi esinamandla esomeleleyo sibonelela ngokuzinza ngaphandle kokufuna iipleyiti ezinobunzima, ezinzima kwaye sinika ubomi obude kunye nemithwalo emikhulu yokuhlawula. Iibhakethi zethu zinokufikelela kuma-50% ngaphezulu kunxibe ubomi xa kuthelekiswa nabantu esikhuphisana nabo. Iibhakethi zethu zibonelela ngokuhambisa umthwalo ngokufanelekileyo apho zinamathela kumatshini. Ubume beebhakethi benziwe ngendlela efanelekileyo yokunxiba, ukukhulisa umthwalo kunye nokunciphisa ukugcinwa njengezinto eziphambili.
Senza ikakhulu zonke iintlobo zebhakethi, ezifana ne-Mini emele, ibhakethi lomhlaba, ibhakethi lelitye, ibhakethi yesikrini, i-coupler ekhawulezayo, amazinyo ebhakethi kunye nezinye izinto ezigugileyo nezikrazukileyo ezilungele excavator. Sinokuvelisa zonke iintlobo zamabhakethi ezahlukileyo ngokweemfuno zakho. Wamkelekile umbuzo singakuqinisekisa elona xabiso lisezantsi ngomgangatho ophezulu.